Empira Antenantenany tany Ejipta - Wikipedia
Ny Empira Antenantenany tany Ejipta dia nanomboka tamin’ny taona 2065 tal. J.K. ka niafara tamin’ ny taona 1781 tal. J.K. ary nahitana fifandimbiasan’ ny dinastia efatra, dia ny dinastia faha-11 hatramin’ ny faha-14. Tokony ho tamin’ ny taona 2135 tal. J.K. dia nanorina ny dinastia faha-11 ireo mpanapaka fileovana (nômarka) tao Tebay. Niezaka nanitatra ny fanjakany manomboka ao Tebay mianavaratra sy mianatsimo ny Antefa (Antef), mba hampiray indray an’ i Ejipta, nefa ny faraôna Mentohôtepa I no namita ny fakana indray ny tany. Nandritra ny fanapahan’ ity mpanjaka ity no naha andriamanitra fara tampony an’ i Amôna. Izy no nandimby ny Vanimpotoana anelanelany voalohany sady narakarahin' ny Vanimpotoana anelanelany faharoa.
Ny nahaterahan’ ny fivavahana amin' i Amôna-RaModifier
Tamin’ ny dinastia faha-12, izay natomboky ny faraôna Amenemesy I, dia nafindra ara-pamantarana tany avaratra any Litsty ny renivohitra, izay tsy lavitra an’ i Faioma. Nandritra izany fotoana izany dia niseho tamin’ ny alalan’ ny marimaritra iraisana ara-pivavahana ny fikendrena ny fanamafisana ny firaisan’ i Ejipta. Izany marimaritra iraisana izany dia niseho teo amin’ ireo mpitondra fivavahana tao Tebay sy tao Heliôpôlisy izay nampiombonana ny andriamanitra Amôna tamin’ ny andriamanitra Ra. Amin’ ny maha mpanelanelana ny andriamanitra Amôna-Ra amin’ ny olombelona ny faraôna dia nanamafy ny fahefany ny faraôna tamin’ ny alalan’ ny fanetreny ny fahefan’ ny tompomenakely any amin’ ny faritany sy tamin’ ny alalan’ ny fiantohany ny fifandimbiasana eo amin’ ny fitondran’ ny mpanjaka. Tamin’ izany fotoana izany ihany dia tsy ny faraôna ihany no afaka misitraka ny tsy feteza-maty fa ny olona rehetra mahafeno ny fepetra momba ny fombafombam-pivavahana tokony hatao.
Fihavaozana ara-tsaina sy ara-kolontsainaModifier
Nandritra ny fanapahan’ ireo Amenemesy sy ireo Sesôstrisy dia niforona koa ny sarangan’ ny mpiasam-panjakana, izay teo anelanelan’ ny vahoaka sy ireo olona ambony. Nitombo miandalana ny fahefan’ ny mpitan-tsoratra (scribes). Nifoha indray ny saina sy ny kolontsaina tao Ejipta ka niteraka ny fahamaroan’ ny sokajin-dahatsoratra, hatramin’ ny tantara mahatalanjona, ny fanadihadiana ny fisainan’ ny olombelona, ny tononkalo malahelohelo, ny famelabelarana momba ny siansa. Izany rehetra izany dia voasoratra amin’ ny papirosy (papiry). Nandroso ny fanorenana trano sy lapa ary fasana tsara tarehy, toy izany koa ny zavakanto sy ny fanefena firavaka vahevitra mialoha mbamin’ ny pitsopitsony madinika.
Ny pôlitikam-pifandraisana amin’ ny any ivelany nataon’ ny faraôna Amenemesy I dia notohizan’ ireo mpandimby azy toa an’ i Sesôstrisy I, i Amenemesy II, i Sesôstrisy II, i Sesôstrisy III, i Amenemesy III ary i Amenemesy IV. Nisy ny fanorenana manda fiarovana manerana an’ i Nobia sy i Sodàna. Misy ny solontenan' ny mpanjaka (governora) nalefa hifehy an’ i Palestina sy an’ iSiria. I Sesôstrisy III izay nanapaka tamin’ ny taona 1881 tal. J.K. hatramin’ ny 1842 tal. J.K. dia nanangana tafika maharitra nampiasainy tamin’ ny fanafihana ny Nobiana tany atsimo sy nentiny niady tamin’ ny Libiana tany andrefana. Nozarainy ho faritra telo matanjaka ny fandraharahana ny fanjakana, izay nofehezin’ ny mpiasam-panjakana ambony avy izay niakina tamin’ ny viziry.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Empira_Antenantenany_tany_Ejipta&oldid=1000568"
Dernière modification le 21 Janoary 2021, à 10:22
Voaova farany tamin'ny 21 Janoary 2021 amin'ny 10:22 ity pejy ity.